Wararka - Maxay eyda qaar uga sarreeyaan kuwa kale?
Waxaan ku aragnaa eeyo hareeraha ka jira qaarna waxay umuuqdaan inay leeyihiin tamar aan xadidneyn, halka kuwa kale ay gadaal u jiifaan. Waalidiin badan oo xayawaan ah ayaa si deg deg ah ugu yeera eeygooda tamarta sare leh "hyperactive," Maxay eeyaha qaar uga sarreeyaan kuwa kale?
Adhijirka Jarmalka, Isbahaysiga Xuduudaha, Soo Celinta Dahabiga ah, Siberia Huskies, Terriers - maxay eydan eyda oo dhami wadaagaan? Waxaa loo soo saaray shaqo adag. Waxay u muuqdaan inay yihiin feisty iyo hyper.
Sanadihii hore eey
Eeyaha yar yar si dabiici ah ayey u tamar badan yihiin, kuwa waaweyna wey yareyn karaan da'da, laakiin eeyaha qaarkood waxay u firfircoon yihiin noloshooda oo dhan, waxay kuxirantahay caafimaadkooda. Inta lagu jiro sanadahan qaab dhismeedka, is dhexgalka bulshada, tababbarka saxda ah, iyo xoojinta wanaagsan waxay fure u yihiin eeyga tamarta sare leh ee fayoobaanta guud ee sanadaha dambe.
Cunnooyinka raqiiska ah waxaa caadi ahaan lagu soo raray waxyaabo uusan eeygaagu u baahnayn, sida buuxiyo, wax soo saar, midabayn, iyo sonkor. Quudinta eeyahaaga cunto tayo-yar ayaa saameyn ku yeelan karta dhaqankooda, sida cunista cunnada qashinka ah waxay beddeli kartaa niyaddayada. Daraasaduhu waxay leeyihiin isku xirnaan udhaxeysa cunsuriyada iyo waxyaabaha cunnada eyga qaarkood, sidaa darteed macno ayey leedahay inaad ku quujiso eeygaaga cunto tayo sare leh saafi ah.
Eyda firfircoon waxay u baahan yihiin jimicsi la soo diray oo hal mar ah iyaga oo ah saaxiibka ay jecel yihiin.Waad la ciyaari kartaa ciyaaraha iyaga. Sidoo kale keen xarigga eeyga, safarka loo tago eeyga ayaa leh iyaga oo ordaya, is dhexgalka, iyo da 'la'aan waqtiga.